ICanonical ibhengeze ukusetyenzwa kwakhona kwe-Snapcraft | Ubunlog
ICanonical ibhengeze ukusetyenzwa kwakhona kweSnapcraft
Ubumnyama | | Ubuntu
Ukutyhilwa kweCanonical mva nje izicwangciso zakho onazo ezilandelayo uhlaziyo olukhulu lwekhithi yezixhobo ze-Snapcraft, esetyenziselwa ukuvelisa, ukusasaza kunye nokuhlaziya ifomati yephakheji ye-Snap ethandwayo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-codebase ye-Snapcraft yangoku ibhengezwe njengelifa kwaye iya kusetyenziswa xa kuyimfuneko sebenzisa ubugcisa obudala.
Kwintengiso yakhe uyayikhankanya loo nto ukusuka kwiinguqu ezinkulu ezicetyelwe ukuphunyezwa kwaye abanye kuzo bathi sele ziqhuba azisayi kuchaphazela imodeli yosetyenziso lwangoku, njengoko Ubuntu Core 18 kunye neeprojekthi ezinxulumene nama-20 ziya kuqhubeka nokusebenzisa imodeli endala ye-monolithic Snapcraft.
Ukongeza koku, bakhankanya ukuba imodeli entsha yemodyuli ye-Snapcraft icwangcise ukuba iya kuqalisa ukusetyenziswa kwisebe le-Ubuntu Core 22.
Enyanisweni, izinto zintsonkothe ​​ngakumbi kwaye zithande ukuntsonkotha ngakumbi njengoko ixesha lihamba. Kule minyaka mithandathu idlulileyo, iqela le-Snapcraft lisebenze ukwenza imveliso yabo engundoqo ibe yimodyuli, isebenze, kwaye iluncedo kubaphuhlisi be-Snap, ukwandisa ukusebenza kwayo kunye nokwazisa amandla amatsha ekuhambeni kwexesha. Ngandlela ithile, iyimveliso epheleleyo kwaye isebenza kakuhle injongo yayo. Kodwa kukho iindlela zokwenza izinto zibe ngcono. Eli nqaku lijonge kwikamva le-Snapcraft.
Ngokuphathelele izizathu zokuba kutheni kujongwe ukuba kuthathelwe indawo Snapcraft endala, kungenxa yokuba se ufuna ukunikezela ngokhetho olutsha, oluhlangeneyo kunye nolwemodyuli nto leyo eya kwenza kube lula kubaphuhlisi ukuba benze iipakethe ze-Snap, bongeza kule nto ukuba nabo bafuna ukuyiphelisa kanye kunye nayo yonke inkathazo yokudala iipakethe eziphathwayo ezisebenza kuzo zonke izinikezelo.
Isiseko se-Snapcraft entsha yindlela yaMalungu oBuchule, kukhankanyiwe ukuba ukongeza ekuvumeleni ukuhlanganiswa kweepakethi, iya kuba nako ukufumana idatha evela kwimithombo eyahlukeneyo, iyiqhube ngeendlela ezahlukeneyo kwaye yenze uluhlu lwabalawuli kuluhlu. FS, ilungele ukuphunyezwa kweepakethe.
I-Craft Parts ibandakanya ukusetyenziswa kwamacandelo aphathwayo kwiprojekthi, enokuthi ikhutshelwe, ihlanganiswe kwaye ifakwe ngokuzimeleyo.
Umbono osisiseko ujikeleze ukwahlula i-Snapcraft ibe yincinci, nangaphezulu yeemodyuli kunye nezinto ezinokuphinda zisetyenziswe ezinokuthi zisetyenziswe kuluhlu lweemveliso ezahlukeneyo. Umhlaba oqhelekileyo wale nzame luluhlu lwamathala eencwadi oBugcisa, njengoko sele sixoxile kwiposti yebhlog yeeNdawo zoBugcisa. Ithiyori ifuna ukusetyenziswa kwejenereyitha yenxalenye yegeneric esekwe kubuchwephesha kunye nabathengisi bamacandelo, kunye nokusebenza okongeziweyo kwe-Snapcraft njengomaleko owahlukileyo. Umbuzo kuphela ngulo, yintoni isantya senkonjane? Kuya kuba nzima kangakanani ukuyila kunye nokusetyenziswa koku?
Kanye ngaphambi kwexesha leholide, iqela le-Snapcraft lazimisela ukuphendula loo mbuzo kanye kwaye livavanya ubungakanani bokumodareyitha kwindlela yabo.
Ukukhetha ukuphunyezwa okutsha okanye i-Snapcraft endala iya kwenziwa ngendlela ekhethekileyo eyakhelwe-ngaphakathi yokugcina kwinkqubo yokwakha. Ke ngoko, iiprojekthi ezikhoyo ziya kukwazi ukwenza iipakethe ze-Snap ngaphandle kotshintsho kwaye ziya kufuna uhlengahlengiso kuphela xa iipakethe zitshintshelwa kuguqulelo olutsha lwesiseko senkqubo ye-Ubuntu Core.
Ngokubhekiselele kumsebenzi osele wenziwe, isishwankathelo esikhawulezayo sawo kwabelwana ngaso:
I-codebase yangoku ye-Snapcraft ngoku ithathwa njengelifa.
Eyona ndawo yokungena kule phakheji iqhuba xa kufuneka i-backup ye-Snapcraft yelifa.
Ilifa le-Snapcraft ligcina idatha yoqwalaselo lweprojekthi kwifomu yesichazi-magama.
Oku kwatshintshwa ukuze kusetyenziswe imodeli yepydantic. Kwakhona, i-schema ye-JSON iya kufuneka igcinwe yahlukile.
Iprototype elula yenziwe kusetyenziswa isiseko se-core22 (umfanekiso wophuhliso), okukhokelela kwiphakheji efakekayo ngokukhawuleza equlethe isicelo sovavanyo.
Gqibela ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo Malunga nenqaku, ungajonga isibhengezo sokuqala kwi ukulandela ikhonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » ICanonical ibhengeze ukusetyenzwa kwakhona kweSnapcraft
I-EasyOS, umxube wePuppy Linux enezikhongozeli
I-ModernDeck, umxhasi we-Twitter wedesktop okanye izikhangeli zewebhu